Soomaaliya iyo Itoobiya oo Guddi u saaray arrinta biyo xireenka wabiyada | Sagal Radio Services
Madaxweynaha Soomaaliya iyo Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa isku afgartay qodobo dhowr ah, iyadoo Itoobiya cadeysay in aysan diyaar u aheyn fara gelin ay ku sameyso Soomaaliya, isla markaana wixii ku saabsan arrimaha dibadda ay uga dambeynayaan Madaxweynaha dowladda Federaalka.
Wasiir Yuusuf Garaad ayaa sheegay in arrimaha wabiyada loo saaray guddi labada dhinac oo la isku afgartay,kuwaasoo baaritaano ku sameynaya xaaladaha keenay in wabiga shabelle uu sanadkii labaad guro.
“Waxaa laga wada hadlay arrimaha biyaha, gaar ahaan wabiga shabelle, waxaa la isla gartay in guddi farsamo labada dhinac u saaraan, , hadii waxqabad u baahan tahay wax looga qabto, dowladda federaalka ay itoobiya kala xaajooneyso wixii arrimahaas ku saabsan ee Soomaaliya dhinaceeda quseeya”ayuu yiri Wasiir Yuusuf Garaad.
Wabiga Shabeelle iyo Wabiga Jubba oo mara gobolo ka mid ah Soomaaliya ayaa ka yimaada Itoobiya, waxaana labo sano oo isku xigta guray ama biyo yareeyay wabiga Shabeelle oo mara Gobolada Hiiraan, Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose oo ah gobolada ugu wax soos aarka badan.
Maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sameystay biyo xireeno waa weyn, taasoo keentay inuu guro wabigii marayay goboladaas.
Dhinaca kale Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa u balan qaaday dowladda Soomaaliya in sanad walba ay Soomaaliya siinayaan deeq waxabarasho 500 arday, kuwaasoo ay ku jiraan waxbarashada heerarkooda kala duwan, sida PHD.
Si kastaba ha ahaatee dowladda Itoobiya ayaa la filayaa inay wax badan ka bedesho sidii ay ula macaamileysay Soomaaliya, iyadoo safarkii Madaxweyne Farmaajo uu wax badan ka bedelay fikirka Itoobiya ka aaminsaneyd madaxweynaha, isla markaana labada dal uu haatan u furmay bog cusub oo xiriir dhab ah.
Tags itoobiya iyo Soomaaliya